Tag: kumhara mapeji | Martech Zone
Tag: kumhara mapeji
Chitatu, Kurume 3, 2021 Chitatu, Kurume 3, 2021 Douglas Karr
Nepo vatengesi vazhinji vachingoisa fomu pane peji reWordPress, izvo hazvireve kuti yakanyatsogadziriswa, inoshandura zvakanyanya peji rekumhara. Mapeji ekumhara anowanzo kuve akati wandei maficha uye akabatanidzwa mabhenefiti: Zvishoma Zvinokanganisa - Funga nezvemapeji ako ekumhara sekuguma kwemugwagwa uine zvishoma zvinokanganisa. Navigation, sidebars, tsoka, uye zvimwe zvinhu zvinogona kukanganisa mushanyi wako. Yekumhara peji anovaka inoita kuti iwe ugone kupa yakajeka nzira kutendeuka pasina zvinokanganisa. Kubatanidzwa - Se a
China, July 9, 2020 China, July 9, 2020 Douglas Karr
Ivo vanhu veUpler vakaburitsa iyi inofambidzana infographic, Iyo Yakadzika Dhiza Mukushandisa kweZvinoonekwa muKutora Mapeji, iyo inovhara mashandisirwo emapeji pamwe neakakomba ekuona zvinhu zvinokanganisa kutendeuka kwemitengo. Zvikonzero zvekushandisa Mapeji Ekumhara Targeting Mazwi Akakosha eOrganic Kutsvaga - Nekugadzira peji rekumisikidza rakagadziriswa enjini dzekutsvaga, unogona kukwidza kune maalgorithms uye uwane iwo chaiwo traffic kune yako yekumhara peji. Nekusavandudza, iwe unogona